Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker 1.658.198 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.658.198 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ★အမြင့်ဆုံး (4.8) ★ကာလပြက္ခဒိန် rated!
43 နိုင်ငံများကျော်ကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ထိပ်တန်း 1 ။
63 နိုင်ငံများကျော်ကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ထိပ်တန်း5။
သန်း 100 ကျော်က Android အသုံးပြုသူများကာလပြက္ခဒိန်ကိုချစ်။
ကာလပြက္ခဒိန်နှင့်သင်၏ရာသီသံသရာခြေရာခံထားပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကာလ, သံသရာ, မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်သန္ဓေ၏အခွင့်အလမ်းခြေရာခံ။ ကာလ tracker တွင်နှစ်ဦးစလုံးအမြိုးသမီးမြား ထင်သည်အထင်မှား မှရှာဖွေနေနဲ့ မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုကူညီပေးသည်။
ကာလ Tracker သငျသညျ မမှန်ကာလ သို့မဟုတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလရှိမရှိ, အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာကိုယ်ဝန်သည်သင်၏ အခွင့်အလမ်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့သားအိမ်ခေါင်းချွဲ, BMI, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, အလေးချိန်, အပူချိန်, ရောဂါလက္ခဏာတွေသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာလဒိုင်ယာရီအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာ အလေးချိန် ဆုံးရှုံးသွားနှင့်ကျန်းမာနေဖို့, သင်ပုံသဏ္ဍာန်ရကူညီပေးပါမည်။
⏰PILL REMINDER & ကာလအတွင်း REMINDER:
- အများပြည်သူအတွက်ရှက်ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှရှောင်ရှားရန်, ကသတိပညာရှိဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပေးချက်စာသားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
- ကာလ, မွေးဖွားခြင်းနှင့်မျိုးဥထွက် tracker များအတွက်အသိပေးချက်များ
- contraceptives ဆေးပြား သတိပေးချက် (ဆေးပြားတို့ပါဝင်သည်, လက်စွပ်, patch ကို & ထိုး)
📝PERIOD & ဓာတ်မြေသြဇာ tracker:
- သံသရာနှင့်မျိုးဥထွက်, ရာသီကြိုတင်ခန့်မှန်းကူညီပေး
- ကာလဂဏန်းတွက်စက်, မွေးဖွားဂဏန်းတွက်စက်နှင့်ခန့်မှန်းအပေါ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် & ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေး app ကိုရယူရန်👶🏼TRYING:
- သားအိမ်ခေါင်းကုမ္ပဏီသားအိမ်ခေါင်းချွဲ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအဖွင့်နဲ့တူမြေသြဇာကောင်းသောရောဂါလက္ခဏာ tracker,
- ပိုမိုကောင်းမွန်သောမိသားစုစီမံကိန်းများအတွက်နေ့ရက်တိုင်းထင်သင့်ရဲ့အလေးသာ Check
- ဒါဟာကာလ & မြေသြဇာရက်ပေါင်းခြေရာခံပေါ်မှာအစက်အပြောက်, မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု App ဖြစ်ပါတယ်
😊LOSE WEIGHT, TRACK လက္ခဏာတွေ & စိတ်ဓါတ်များ:
- နီးစပ် tracker
- utilities Google account ကို data ကို backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
- ဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကရန်သင့်ကာလဒေတာ Backup ကိုနှင့် restore
🔐MULTI ACCOUNT ကို & လုံခြုံမှု:
- မာလ်တီအကောင့်ကာကွယ်မှုကိုခြေရာခံ & လုံခြုံရေး
- သင့် timeline အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောမှတ်စု View သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်,
** Check ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း **
မျိုးဥထွက် app ကို
ဒါဟာသင့်ရဲ့မျိုးဥထွက်ပြက္ခဒိန်, ကာလပြက္ခဒိန်စစျဆေးနိုငျ, ကသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုပိုမိုတိကျပါလိမ့်မည်, မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်ကာလ tracker များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမျိုးဥထွက် App ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် apps များ
ကိုယ်ဝန် app များကိုရှာဖွေနေပါသလား အဘယ်သူမျှမကျေနပ်ကိုယ်ဝန် app များကို? အကောင်းဆုံးကိုကိုယ်ဝန် app ကိုစမ်းကြည့်ပါ! ဒါဟာသင်အလွယ်တကူကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု get ကူညီပေးသည်။
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.39k 15.81M
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.658.198
App Name: Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker
Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ